Ogaden News Agency (ONA) – Ifo iyo Dhagaxlay oo 2ba kulan oo muhiim ah ay Dhalinta OYSU ku Qabsadeen.
Ifo iyo Dhagaxlay oo 2ba kulan oo muhiim ah ay Dhalinta OYSU ku Qabsadeen.
Ururka OYSU ayaa xerada Ifo kuqabtay munaasabad aad ubalaadhan oo lagu dooranayay xubnihii sanadka soo socda hadii Alle idmo hogaamin lahaa ururka OYSU faraciisa Muftaaxul-xoriyo ee ka howlgala xerada Ifo. Shirkan oo ahaa mid mudaba la qorshaynayay dadkuna ay ka dhursugayeen ayaa qabsoomay abaare 2:00 duhurnimo xiliga Afrikada Bari waxaana lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah, ka dibna waxaa la guda galay ajandihii shirka oo kusaabsanaa kala doorashada 2 xubnood oo kamid ah xubnaha ugu firfircoon ururka.
Intaan la bilaabin doorashada ayaa waxaa laga hormariyay warbixin dheer oo ka warbixinaysa dal iyo dibadba waxaana howsha la wareegay gudiga farsamada ee soo sharaxay 2da xubnood ee ay ugu talagaleen in lakala doorto waxaana si quruxbadan loo bilaabay codayntii oo u dhacaysi habka fartaaga, halkaasoo lagu doortay halgame Cabdi Carab oo ah shakhsi aad ugu bisil howlaha halganka aadna ufirfircoon.
Intaas kadib waxaa khudbado kookooban soojeediyay mas’uuliyiin badan oo lagu casuumay shirka oo ay kamid ahaayeen Xoghayaha OYSU Xagardheere, afhayeenka OYSU Dhagaxlay iyo xubin katirsan mas’uuliyiinta sarsare ee OYSU mudane Bashiir oo khudbad qiimo badan soo jeediyay. Doorashadu ayaa ku dhamaatay guul taariikhi ah.
Dhanka kale waxaa isla Axadii xerada Qoxootiga Dhagxlay ka dhacay shir balaadhan oo ay soo agaasimeen ururka OYSU faraciisa Dhagaxlay, kulankasoo ay kasoo qaybgaleen dhamaan xubnaha OYSU iyo qaybo kamid ah xunbaha faraca midnimo sida gudiga faraca, dalada culima iyo ururka haweenka.
Shirkan oo ahaa shirkii caadiga ahaa ee uu ururku yeelan jiray ayaa lagu furay aayadaha qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay sh C/najiib oo wacdi qiimo badan munaasabada kasoo jeediyay. Ka dib waxaa bilowday ajandayaashii shirka oo uu ugu mihiim sanaa Abaabuka. Xoghayaha OYSU Dhagaxlay mudane Muuse Cismaan ayaa ugu horaynba madasha kasoo jeediyay warbixin dheer oo dhinacyo badan uu kaga warbixiyay isagoo soo uruuriyay dhacdooyinkii ugu danbeeyay dal iyo dibadba. Wuxuu sidoo kale xusay waxqabadkii OYSU Dhagaxlay mudadii ay jireen wuxuu sidoo kale xusay wixii ururka u
Intaas kadib waxaa horay loogalay qodobadii shirka waxaana xooga lasaaray dhanka Abaabulka oo si aad ah loo gorfeeyay dad aad ubadana ay kahadleen waxaana la isla meel dhigay in horay looga dhaqaaqo meesha hada lataagan yahay qofkastana lagula xisaabtabo hormarkiisa iyo dib dhiciisaba. Wuxuu qodabka abaabulku qaatay wakhti aad udheer wuxuuna ahaa qadobka kaliya ee xooga la saaray shirkii ururka OYSU Dhagaxlay.
Sidoo kale waxaa lagaadhay qodobkii afkaarta xubnaha waxaana madasha
fikirkooda ka dhiibtay dhalin yaro aad ubadan oo fakirkooda saliimka ah laga dhagaystay.
Guntii iyo gunaanadkii waxaa sifiican usoo dhamaaday shirkii Ururka Dhalinta iyo Ardayda Ogadenia OYSU.